IPlasma 5.16 iya kwazisa ngezaziso ezintsha kwaye ungaphazamisi imo | Ubunlog
IPablinux | | KDE, Kubuntu, Ubuntu
Namhlanje ibiyimini apho bendinamathandabuzo kwaye bagxothwa kwakamsinya emva koko. UKubuntu usebenzisa amandla amaninzi kunoBuntu kwaye oko kuyacaphuka. Kwelinye icala, ilaptop yam ineengxaki ezithetha ukuba ngalo lonke ixesha ndivusa ebuthongweni, iziqwenga zesikrini zimnyama. Ngelixa bendicinga ukubuyela ku-Ubuntu, ndikhumbule izicelo ezinje ngoGwenview kwaye ndiye ndaqala ukuzola. Kungekudala emva koko, uLuntu lwaseKDE li papashwe into eza kufika ecaleni IPlasma 5.16 kwinyanga ezayo kwaye amathandabuzo am anyamalele.
Imiselwe uJuni, IPlasma 5.16 izakufika ngesizukulwana esilandelayo sezaziso zePlasma. Yinkqubo evuselelweyo ebikade ikhula, okanye endaweni yoko engqondweni yomakhi wayo, kangangeminyaka. Ukujonga umfanekiso ophethe le posi, sele sinokuqonda ukuba utshintsho luya kulungela. Kubaqalayo, izaziso ezintsha ziya kuba nefayile ye- Uyilo olutshaInguqulelo entsha inokubumbana ngakumbi kunye ne icon kwelinye icala kule ikhoyo ngoku, into endicinga ukuba iyavakala kuba ngale ndlela siya kuba nolwazi sigxile ngakumbi.
1 IPlasma 5.16 iza ngoJuni
2 Jonga kwangaphambili kwizaziso
3 Imowudi eNtsha yokungaphazamisi kwiPlasma 5.16
4 Iingxelo zenkqubela phambili
5 Imbali yesaziso sePlasma 5.16
6 IPlasma 5.16 beta iya kukhutshwa ngoMeyi 16
IPlasma 5.16 iza ngoJuni
Ifonti iphuculwe kwaye i-header inokuhlengahlengiswa. Kodwa ii-makeovers ayizizo zodwa abaza kuzazisa. Ndiza kufika izaziso ezingapheliyo ezakuhlala kwiscreen de sizamkele okanye sizamkele. Oku kuyakuqinisekisa ukuba siyakufumanisa yonke into, okanye ubuncinci yonke into ebalulekileyo esele siyilungiselele kwangaphambili. Phakathi kwezi zaziso siyakuba nazo ze KDE Qhagamshela izicelo zonxibelelwano.
Xa isaziso sinokunxibelelana nayo, isalathisi siya kutshintsha kwisandla sokukhomba. Kwelinye icala, kuya kubakho ibar encinci kwelinye icala eya kuthi ibonise ixesha eliseleyo ukuze isaziso sinyamalale. Njengomsebenzisi weTelegram, oku kundikhumbuza indlela le app yokuthumela imiyalezo ilawula ngayo izingxoxo esizicimileyo, umzekelo: isibonisa isangqa kunye nokubala. Izaziso zePlasma 5.16 ziya kwenza into efanayo, kodwa ngebhari eyanyamalalayo.
Jonga kwangaphambili kwizaziso
Eyona nto ayithandayo umphuhlisi wayo, kwaye ayothusi, kukuba izaziso zePlasma 5.16 ziya kubandakanya ifayile ye- ukujonga umxholo okuphuculweyookoko kusetyenziswa isoftware ehambelanayo kunye nokujonga kwangaphambili kunengqondo. Umzekelo, iSpectacle ibonisa isaziso ngokubanjwa esisandula ukukwenza, kodwa ingxelo entsha iya kubonisa imvelaphi eya kuxhomekeka kwinto esisanda kuyithatha, njengoko sibona kulo mfanekiso ulandelayo:
Imowudi eNtsha yokungaphazamisi kwiPlasma 5.16
Le ndlela sele ikwiinkqubo ezininzi ezisebenzayo ixesha elide, ngakumbi iifowuni eziphathwayo. KwiPlasma 5.16 iya kufikelela nakwiikhompyuter ezisebenzisa iinkqubo ezinje ngeKubuntu. Xa usebenzisa imowudi Sukuzihlupha Asizukubona nasiphi na isaziso windows kwaye izandi ziya kuthuliswa. Asiyi kuphulukana nezaziso, kodwa siya ngqo kwimbali. Kodwa kuyakubakho imicimbi eyahlukeneyo engxamisekileyo eya kuthi iqhubeke isazisa, njengebhetri esezantsi.
Iingxelo zenkqubela phambili
Kude kube ngoku, inkqubela phambili yebar yayi… kulungile, yayingeyiyo inkqubela phambili yebha. Ngokwenene isangqa sokugcwalisa esikwabonisa inani leenkqubo ezisebenzayo. Oku kuyavela, umzekelo, xa ukopa iifayile. Kwinguqulelo entsha, ezi iingxelo zenkqubela phambili ziya kuba kubukhulu obufanayo nezaziso, eya kusenza sikwazi ukubona ulwazi ngokucacileyo. Siza kubona ixesha eliseleyo ukugqiba umsebenzi.
Xa umsebenzi ugqityiwe, ixesha liya kubonakala ngathi liphelile kwaye isaziso siya kufana nesaziso esiqhelekileyo. Ezi ngxelo zenkqubela phambili ziya kuba ngaphezulu okanye ngaphantsi kunoko sikubonayo xa sikhuphela into kwiFirefox, umahluko esiza kuyibona kwenye indawo nakwi Uyilo lwendalo lwePlasma.
Imbali yesaziso sePlasma 5.16
Imbali entsha yesaziso igcina zonke izaziso kwaye uzihlele kwangoko. Kwelinye icala, iyakubonisa ugaxekile omncinci, okt Izaziso esele sizivalile, sinxibelelana nazo, njl., aziyi kongezwa kwimbali.
Konke oku kunokuba nzima ukulawula ngaphandle iisetingi zesaziso esitsha Oko kuyakufika kunye nePlasma 5.16. Kolu seto sinoku:
Qwalasela izaziso ezibalulekileyo, ukuba sifuna ukuba ziboniswe okanye hayi kwimowudi yokungaphazamisi okanye zigcine zibonakala.
Lawula izaziso eziphambili.
Qwalasela indawo ekubhalwe kuyo isaziso.
Ixesha abaya kubonakala ngalo.
Qwalasela ukuba sifuna ukuba iingxelo zenkqubela phambili zibonwe.
Useto lokumisela izaziso ngokusetyenziswa kwesicelo.
IPlasma 5.16 beta iya kukhutshwa ngoMeyi 16
Inguqulelo elandelayo yePlasma Inokuvavanywa ukusuka ngoMeyi 16. Ukufakwa kwayo kunconywa kuphela kubaphuhlisi abanezicelo zabo ezinokuhambisa izaziso. Ukufaka uhlobo oluzinzileyo lwePlasma 5.16 kuya kufuneka sifake indawo yokugcina i-KDE yoLuntu kunye nalo myalelo:
Yintoni okhangele phambili kuyo ukuzama kule nkqubo intsha yokwazisa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Kubuntu » IPlasma 5.16 iya kwazisa ngezaziso ezintsha kwaye ungaphazamisi imo
Ndandiye ku-Ubuntu kude kube luhlaziyo lokugqibela kwaye ndicime iHard Disk ndabeka uKubuntu.
Kumava am amafutshane kubonakala kum njengenkqubo esebenziseka lula.
Akunyanzelekanga ukuba ndihambe ndibeka ii-add-ons kunye nezinto ezinje ngo-Ubuntu ukwenza ucofe ekunene kweTouchpad, okanye ukuphatha ifayile kunamanzi kwaye kuyakhawuleza.
Ndingabeka iifayile kwidesktop kunye neendlela ezimfutshane (iziqalisi) kuyo nakwezinye izinto.
Ulawulo lweedrive ezisuswayo lubonakala ngathi lunamanzi ku-Kubuntu kunye nendlela yokuhlaziya ngokuFumanisa okunengqondo ngakumbi kune-Ubuntu.
Ndifuna ukuba iqondwe, ndihlala ndisebenzisa iiWindows ukuba nobuhlobo nomsebenzisi, andikhathali ngezithintelo zayo, inkululeko kunye ne-blah blah blah, andithethi ngefilosofi, ndithetha ngokusebenziseka nomsebenzisi, ukuba Ubuntu kunye neGnome ayinanto kwaye ininzi kwiKubuntu
Kwaye ndisebenzisa i-Linux kuhlobo lwayo lwe-Kubuntu ngoku kuba ndivavanya iintlobo ezahlukeneyo ze-Ubuntu kancinci kancinci ukubona ukuba zinjani.
Ngendlela, ndifuna iWindows, kukho izinto endingasakwaziyo ukuzenza nge-Ubuntu (okanye iincasa zayo). Umzekelo ukufaka iprinta engenazingcingo ye-Samsung 2165 ML, khuphela abaqhubi bayo kwi-linux kwaye uyifake ngokwenkqubo echaziweyo kwaye ndisalinde iLinux ukuba ibazi.
Ndithathe umatshini one Windows endiyibolekileyo ndayifaka kuyo, inethiwekhi yasekhaya engenazingcingo yamqaphela kwaye emva kwemizuzu eli-10 ndandisele ndinesiprinta esisebenza ngokwenjongo kaThixo.
Yile nto ndiyithethayo ngokusebenza hayi ngefilosofi yesoftware.
Kude kum ukuba ndiqale isoyikisi kunye nengxoxo malunga noku
Kwaye ngendlela endisebenzisa ngayo iLinux kuba ngenye imini phantse kunyaka ophelileyo iiWindows ziyekile ukusebenza ngenxa yengozi ngokubanzi, kutheni ndingazi, ndikhethe ukubeka iLinux Ubuntu kwaye ndaqhubeka nokusebenza ngokungathi akwenzekanga nto.
IKdenlive 19.04.1 ilapha. Kwaye kungekudala Izicelo ze KDE 19.04.1 ziye Kubuntu 19.04?
Iibhokisi ze-GNOME: isindululo esisemthethweni se-GNOME sokwenza oomatshini ababonakalayo